DMCA - AppsApk.com ။
ပင်မစာမျက်နှာ » DMCA
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ (DMCA) ပေါ်လစီ
AppsApk.com ( 'AppsApk') ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေ, 17 USC ပုဒ်မ 512 ( 'DMCA') ၏ခေါင်းစဉ် II ကိုအောက်တွင်တစ်ခုအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးချဖို့, အပ်လုဒ်တင်ခြင်းသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြသခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်ကို On-ထုတ်ဝေရန်မိမိကိုယ်ကိုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူဥပဒေရေးရာမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များသည်။ ကျနော်တို့ကအရမ်းအလေးအနက်ထားမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု ယူ. ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥပဒေရေးရာမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များ၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအကြောင်းအရာများ၏မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များမှာလျှင် AppsApk.com က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ( '' ဆိုက်ကို ') ပေါ်ရာနှငျ့သငျအကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မပြုခဲ့သငျသညျကိုစွပ်စွဲချိုးဖောက်အကြောင်းအရာဖော်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ရေးသား AppsApk အကြောင်းကြားရမယ် အရေးယူ။
ဗြဲ Designated အကျိုးဆောင်
အဆိုပါ DMCA အောက်မှာစွပ်စွဲချက်ချိုးဖောက်မှု၏အသိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိရန် AppsApk ရဲ့ designated အေးဂျင့်သည်: Attn: မူပိုင်အေးဂျင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန် အခိုင်အမာချိုးဖောက်မှု၏သငျ့လျြောသောအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပေါ်၌ AppsApk ဤနေရာတွင်နှင့် DMCA ကွပ်ထားတယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
II ကို။ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များအတွက်တိုင်ကြားစာအသိပေးစာဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရကြောင်းတစ်ခုသီးသန့်ညာဘက်၏ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်အောက်ပါဒြပ်စင်များသင့်ရဲ့မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုပြောဆိုချက်ကိုတွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်အလုပ် identification ထိပါးပြီဆို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတည်းအွန်လိုင်း site ကိုမှာမျိုးစုံမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်အကျင့်ကိုကျင့်တစ်ခုတည်းအသိပေးစာ, ထို site ကိုမှာထိုကဲ့သို့သောအကျင့်ကိုကျင့်၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစာရင်းကိုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်လျှင်။ အဆိုပါချိုးဖောက်ခံရဖို့အခိုင်အမာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုချိုးဖောက်များ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ကြောင်းဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် disabled ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်လက်လှမ်းသောကြောင့်ပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းနေရာချထားဖို့ကုမ္ပဏီခွင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လုံလောက်သောအချက်အလက်များ၏ identification ။ အဆိုပါဝေဖန်ပြောဆိုထိုကဲ့သို့သောလိပ်စာအဖြစ်ပါတီ, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်, အဝေဖန်ခံရပါတီဆက်သွယ်မေးမြန်းရာစေခြင်းငှါအရာမှာမရရှိနိုင်လျှင်တစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာသို့ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကုမ္ပဏီခွင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များ။ အဆိုပါဝေဖန်ပြောဆိုပါတီထုံးစံများတွင်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုစောဒကတက်ကြောင်းအကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်မှုရှိကြောင်းတစ်ဦးကကြေညာချက်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်က၎င်း၏အေးဂျင့်, ဒါမှမဟုတ်ပညတ်တရားအားဖြင့်အခွင့်အာဏာကိုမရ။ အဆိုပါအကြောင်းကြားစာအတွက်အချက်အလက်များကိုဝေဖန်ခံရပါတီချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရကြောင်းတစ်ခုသီးသန့်ညာဘက်၏ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ကြောင်း, တိကျမှုဖြစ်ပြီး, မုသားသက်သေခံမှု၏ပြစ်ဒဏ်အောက်တွင်သောကြေညာချက်။ အထက်ပါအချက်အလက်များ၏အားလုံးထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဟာအပြောင်းအလဲနဲ့ဒါမှမဟုတ် DCMA သတိပေးချက်တစ်ခုနှောင့်နှေးဖြစ်ပေါ်စေမည်။ လည်းသက်ဆိုင်ဥပဒေ, 17 USC 512 အောက်မှာ (စ), သိလျက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုချိုးဖောက်ကြောင်းဂေါ်သူကိုမဆိုလူတစ်ဦးတာဝန်ယူမှုကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
III ကို။ AppsApk RESPONSE
AppsApk မသန်စွမ်းသူများအတွက်အကျင့်ကိုကျင့်၏အေပျအသုံးပြုမှုဟုဆိုကာတစ်ဦးတန်ပြန်အသိပေးချက်ကိုတင်ပြရန်အသုံးပြုသူရဲ့ညာဘက်ဘာသာရပ်တစ်ခုအသိပေးစာနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, သတ်မှတ်ပေးသော DCMA တွင်ပေးထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, နောကျလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဆိုက်ကိုမဆိုစုတစုလုံးကိုအသုံးပြုသူများအသက်ဆိုင်သောမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်လိုက်လျောလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ AppsApk အခိုင်အမာမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု၏သငျ့လျြောသောအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကမဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို disable အားဖြင့်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မည်, ချိုးဖောက်ခံရဖို့အခိုင်အမာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုချိုးဖောက်များ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သောပစ္စည်း, ရှိသမျှထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ထားပြီပေးအပ် AppsApk ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောနှင့်လုံးဝဆုံးဖြတ်ပါသည်အတွက် AppsApk နေဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်။ AppsApk တန်ပြန်အသိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်ရပ်အတွက် DMCA ၏သင့်လျော်သောပြဌာန်းချက်နှင့်အတူလိုက်လျောပါလိမ့်မယ်။
IV ။ တန်ပြန်အသိပေးချက်
အရာ AppsApk.com အပေါငျးတို့သအသုံးပြုသူများကိုကြိုတင် AppsApk.com သုံးပြီးဖို့, ရှိသမျှသည်အသုံးပြုသူများက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာအဖြစ်သာတရား-ဝယ်ယူဖန်တီးမှုအကျင့်ကိုကျင့်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်သည်ရန်နှင့်သုံးစွဲသူတစ်ဦးရဲ့ access ကိုလက်ခံရရှိအပေါ်သို့ကိုပိတ်ထားရစေခြင်းငှါသဘောတူရန်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကို၏စည်းကမ်းချက်များကိုမှအညီ ချိုးဖောက်ပစ္စည်းတင်သွင်းခဲ့တာကိုသတိထားမိ။ AppsApk လည်းတရား, ချိုးဖောက်မှုများ၏တောင်းဆိုမှုများရန်တုန့်ပြန်တင်ပြခွင့်ပြုထားကြောင်းမီဒီယာအကြောင်းအရာအသုံးချဖို့နှင့်မူပိုင်ခွင့်တိုင်ကြားချက်ကိုပိတ်ထားပြီးအကြောင်းအရာကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်များအချိန်မီပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းရယူသုံးစွဲသူများ၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားလေးစားပါသည်။ တစ်ဦးသင့်လျော်သောတန်ပြန်အကြောင်းကြားစာရေးသားဖို့အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များသည် ကျေးဇူးပြု. :
ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးသောပစ္စည်းကိုဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ဖယ်ရှားရန်၎င်း၏ URL ကိုသတ်မှတ်ပါ။
သငျသညျ 'ပစ္စည်းပစ္စည်း၏အမှားသို့မဟုတ်မဟုတ်မမှန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် disabled ခဲ့ကောင်းတစ်ဦးယုံကြည်မှုရှိသည်။
သငျသညျ '' လိပ်စာတည်ရှိသောထားတဲ့အတွက်တရားစီရင်ရေးခရိုင်များအတွက်ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သဘောတူသော။
သင့်ရဲ့ DMCA အခွင့်အရေးများကိုလေ့ကျင့်ပေးရန်, သငျသညျအဘယ်သူ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည် AppsApk များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအေးဂျင့်မှသင့်ရဲ့တန်ပြန်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရပါမည်:
အီးမေးလ်: အဆက်အသွယ် (@ နှင့်အတူ [မှာ] အစားထိုးရန်) appsapk.com [မှာ]
သင့်လျော်သောအခြေအနေမျိုးမှာ, AppsApk ၎င်း၏သမ္မာသတိရှိထပ်ချိုးဖောက်မှုနေသော၎င်း၏ system သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်ရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်။
VI ကို။ စံချိန်စံညွှန်းများနညျးပညာတိုင်းတာနေရာထိုင်ခင်း
ဒါဟာဆိုလိုသည်မှာကဆုံးဖြတ်သည်စံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံအခြေအနေအောက်မှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှိပါသည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိုက်လျောညီထွေနှင့်မ AppsApk မူဝါဒ,, မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်အကျင့်ကိုကျင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်သို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေကအသုံးပြုလျက်ရှိသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံဖြစ်ပါတယ်။